Ikhansela lilahlwe yicala lokweba izinkomo e-KZN | isiZulu
Ikhansela lilahlwe yicala lokweba izinkomo e-KZN
Babanjwe eNkwalini abahlasele owesilisa ngentululwane yezinhlamvu eFilidi
Oshayasibhamu badubule babulala umalusi bezama ukweba imfuyo
Webelwe imfuyo umculi wokholo
Durban - Lizokuba noKhisimusi omnyama ikhansela le-African National Congress (ANC) ebelisebenzela kuMasipala waseMthonjaneni, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal, elilahlwe yicala lokuntshontsha izinkomo.
UMthokozisi Mthembu obeyikhansela kuwadi-7 kulo masipala, ulahlwe yicala lokubanjwa nezinkomo ezingu-11 zokwebiwa ezibiza isamba semali engu-R60 000, okuvele ukuthi ubezintshontshe eMooihoek Farm, ePiet Retief, esifundazweni iMpumalanga.
Ngokusho kwelinye iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, uMthokozisi lezi zinkomo uzintshontshe ngezithuba zabo-12 ebusuku ngomhlaka-16 Disemba 2016. Lithi uzilayishe elolini ebelishayelwa nguyena zandla zakhe, washosholoza nazo waze wangena KwaZulu-Natal.
"Umnikazi wepulazi uvuke wahlaba umkhosi, amaphoyisa ebe esenza izivimbamgwaqo wabanjwa esengena eVryheid uMthembu nazo izinkomo ezilayishe elolini.
"Ebuzwa ngamphoyisa ukuthi uzithathephi lezi zinkomo, kucelwa namaphephamvume azo, kwahlwa emini, wabika imbiba wabika ibuzi. Kuthe uma amaphoyisa esethi ayambopha, waveza ukuthi uzinikwe ngabanye abafana, okuthe uma belandelwa labo bafana batholakala baboshwa naye.
"Kuthe uma seliqulwa icala bangabakhona ubufakazi obuhlanganisa laba bafana nalolu daba. Badedeliwe ikhansela lasala lodwa obishini," kusho leli phoyisa.
UMthembu kuthiwa sekudlule imihlangano eminingana yokuhlala kwesigungu samakhansela kumasipala engasalubhadi kuyona futhi engabiki nokuthi kungani engayi emihlanganweni.
ILANGA libe selithinta uThami Shangase okhulumela uMasipala waseMthonjaneni othe ngokombiko abawutholile, kuthiwe uMthembu akaphilile, usesibhedlela.
"Siqala ukuzwa ngani ukuthi uboshiwe. Lolu daba sisazolulandela uma kuwukuthi lunjalo ngempela, umasipala uzobe sewuthatha izinyathelo ezifanele," kusho uShangase.
Okhulumela amaphoyisa aseMpumalanga, uBrigadier Leonard Hlathi, uluqinisekisile udaba lokuboshwa kwekhansela. Uthi kumanje lingaphakathi kanti isigwebo salo sizokhishwa ngomhlaka-12 Disemba nonyaka.